Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Ny birao fizahantany afrikanina dia manao ny majika ao Tanzania
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Filohan'ny birao afrikanina momba ny fizahantany any Tanzania
Tonga tany Tanzania ny filohan'ny birao afrikanina fizahantany Cuthbert Ncube tamin'ny faran'ny herinandro teo ho an'ny fitsidihana ofisialy niasa ary nifanakalo hevitra tamin'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Ministeran'ny fizahan-tany sy ny birao fizahan-tany Tanzania (TTB) izay mikendry ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fampandrosoana fizahantany any Tanzania sy Afrika.
Ny Minisiteran'ny fizahan-tany ao Tanzania dia naneho ny fahavononany hiara-hiasa amin'ny African Tourism Board (ATB).
Ny lakilen'ny fizahantany dia ny fampiasam-bola. Dinika momba ny hotely Kempinski Brand misy kintana 5 novolavolaina tao amin'ny valan-javaboarin'i Tanzania Avaratra ao Serengeti, Tarangire, Lake Manyara, ary Ngorongoro no tao anaty fandaharam-potoana.
Nihaona tamin'ny Minisitry ny harena voajanahary sy fizahantany, Dr. Damas Ndumbaro, ao amin'ny biraony any Dar es Salaam.
Ny minisitry ny harena voajanahary sy ny fizahantany ao Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, dia nanao dinidinika tamin'ny filohan'ny ATB Andriamatoa Cuthbert Ncube izay mikendry fiaraha-miasa iraisana amin'ny marketing amin'ny fizahantany Tanzania sy ny fampiasam-bola ataon'ny mpizahatany manerantany.
"Ny fizahantany dia nanjary sehatra lehibe ara-toekarena izay manome asa mivantana, fifanakalozana ivelany, ary fankatoavana eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fahafinaretana toy izany amin'ny fizahan-tany bibidia miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fizahan-tany amoron-dranomasina sy ara-kolontsaina izay nanatsara ny fizahan-tany Tanzania amin'ny fisarihana ireo fizarana tsena isan-karazany na ho an'ny mpizahatany na mpitsidika ary koa ho an'ny fahafaha-mampiasa vola ", hoy ny minisitra.
Avy amin'ity sehatra ity ny Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) dia miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny fizahantany ho manampy amin'ny fitondrana fiara, fanohanana ary famolavolana ny fiafaran'ny fizahan-tany. Tanzania dia hita ho toy ny firavaka any Afrika izay manome be ho an'ny mpampiasa vola sy ny mpandeha.
“Ny fitoniana ara-politika sy ara-toekarena izay nitana andraikitra lehibe tamin'ny fizotran'ny fitomboana ara-toekarena ao Tanzania dia nitaona fifamoivoizana ara-dalàna avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena mankany amin'ny firenena. ny ny fientanam-po ataon'ny filoham-boninahitry Samia Suluhu Hassan, izay lasa masoivohon'ny fizahantany voalohany amin'ny fampiroboroboana an'i Tanzania ho toerana fizahan-tany lehibe indrindra atsy Afrika, [dia] mametraka an'io sehatra io ho andry lehibe amin'ny fitomboana maharitra ao amin'ny firenena ihany koa, "hoy ny Dr. Damas.
Nasongadin'ny Minisitra ny filàna fiaraha-miasa akaiky manerantany amin'ny fanatanterahana ny tanjon'ireo mpamily toekarena lehibe izay hitondra amin'ny fahaleovan-tena sy ny famotsorana ara-toekarena ny ankamaroan'ny Africa.
Amin'ny lafiny dinika lehibe, ny ATB dia niara-niasa tamin'ny Birao fizahan-tany Tanzaniana mba hiara-hiasa sy hiasa akaiky amin'ny firenena amin'ny fanatrarana ny fitomboan'ny harinkarena faobe 30% amin'ny harinkarena mivantana avy amin'ny fitomboana maharitra.
Ncube nanampy hoe: "Raha misy fotoana i Afrika hitsangana, hitombo ary hibaiko ny fitomboan'ny harinkareny dia tsy misy fotoana tsara kokoa noho ny ankehitriny miaraka amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa lehibe kokoa amin'ny fizahan-tany sy ireo sehatra hafa azo antoka manome toky ho an'ny maharitra kokoa ary miaro ny fitomboana ara-toekarena izay hahasoa ny kaontinanta amin'ny ankapobeny. ”
Niaraka tamin'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina, delegasiona eropeana iray avy any Bulgaria no nitsidika ny Colege nasionalin'ny fizahan-tany any Tanzania, izay nanampy betsaka tamin'ny fampiofanana ireo masoivoho manan-danja izay mandray anjara mavitrika amin'ny fitomboan'ny harinkarenan'ny fizahantany.
Nisy delegasiona iraisam-pirenena nivory tany Tanzania niaraka tamin'ny minisitry ny fizahan-tany Tanzania (afovoany), ao anatin'izany ny seha-pitantanana ny birao afrikana (ankavanana).
Araka ny voalazan'i Cuthbert Ncube dia ity no anjaran'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany. Cuthbert dia nitarika ny ATB nanomboka tamin'ny taona 2019. Miorina ao amin'ny Kingdom of Eswatini miaraka amin'ny biraon'ny marketing iraisam-pirenena any Hawaii, Etazonia.
Namarana ny teniny izy tamin'ny filazany hoe: "Ny firahalahiana any amin'ny fanjakana afrikanina no lova tsara indrindra azontsika iainana sy avelantsika. Ny sehatry ny fizahan-tany dia iray amin'ireo antony lehibe manosika ara-toekarena, ka amin'izany dia mitombo ny fandraisan'anjaran'ny fizahan-tany amin'ny vokatra eto an-toerana. Fotoana izao hampiarahana ny herintsika sy hampiray ny fanapahan-kevitsika. Fotoana izao hifindrana ho iray amin'ny vokatra tsy misy tohiny.
“Izao no fotoana hiresahana amin'ny feo iray.
“Avelao hirodana ny rindrin'ny fisarahana ary avelao hitan'ny tetezana ny elanelany.
“Iray ihany isika ary Afrika.”
Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny ATB ao amin'ny africantourismboard.com.